Espaina: Resabe Manodidina Ny Fifidianana Parlemantera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2011 3:37 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Shqip, Français, Português, srpski, Español
[rohy amin'ny teny Espaniola] Ny PP (Popular Party) ao Espaina no nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny ampaham-bato be indrindra. Rehefa voaisa 100% ny vatom-pifidianana, dia nanambara ny fandreseny ny antoko neo-liberaly. Ireo mpanotrona ny fankalazàna tao amin'ny làlamben'i Génova tao Madrid (misy ny foiben-toeran'ny PP) dia nanome andran-tsira ny amin'izay mety ho andrasana ao Espaina manomboka eto: fampihenana ny fandaniana ara-tsosialy sy fampihenana ny asa, mba hanomezana fahafaham-po ny mpifidy azy sy ny tsena. Aoka tsy ho adinontsika fa nahatratra 10.000.000 ny tahan'ny tsy fandehanana mifidy sy ny vato fotsy izay manome ny hery ara-politika faharoa lehibe eto amin'ny firenena, na dia tsy avoakan'ny vokatra loatra aza izany eny anatin'ireo fampahalalala vaovao mahazatra.
@VicenteVallesTV Gritos de “quita el aborto” mientras Rajoy habla en el balcón de Génova.
@VicenteVallesTV Hiakiaka miteny hoe “tsia amin'ny fanalàn-jaza” mandritra ny kabary ataon'i Rajoy eo amin'ny lavarangana iray ao Génova.*
Nandritra ny andro, be ihany koa ny karazana resabe nisy. Maro tamin'ny biraom-pifidianana no nandray ireo mpikambana avy amin'ny mareaverde [es] (Onja Maitso) (mpiaro ny fanabeazana ho an'ny daholobe manohitra ny fampihenana ny fandaniana ho an'ny mpampianatra sy ny fanabeazana), rehefa nanatona hifidy ry zareo miaraka aminà t-shirt maitso dia tsy navela hisitraka ny zony [es] satria manitsakitsaka ny filazàna navoakan'ny Filankevi-pifidianana izay nampitandrina ireo mpiasam-panjakana tsy hitondra sora-baventy mankany amin'ny toeram-pifidianana, na dia tsy miresaka mivantana momba ireo mpifidy aza ilay izy.
T-shirts voarara tany aminà toeram-pifidianana samihafa.
@democraciareal#votodenuncia [fitarainana amin'ny fifidianana] Raràn'ny Filankevi-Pifidianana tsy hifidy ireo izay mitafy #camisetaverde [t-shirt maitso]#2on#mareaverde#votar#mesa2on
“Raha toa ny mpifidy iray mandeha any amin'ny biraom-pifidianany ary tsy avela handatsa-bato satria mitafy t-shirt maitso, dia manana safidy roa ilay olona: na manaisotra ilay t-shirt, na mametraka fitarainana sy mivoaka fa tsy mifidy”, hoy ny mpitondra teny iray taminà biraom-pifidianana.
Fa koa, nisy tranga iray notaterina fa hoe ireo mpifidy avy amin'ny antoko politika iray mpiaro ny zon'ny biby (PACMA) dia tsy nanana vatom-pifidianana [es] harotsaka. Noho izany, nisy solontena avy amin'ny Ministeran'ny Atitany nanolo-tena hirotsaka hanadihady ny tsy fetezan-javatra tao amin'ilay toeram-pifidianana, izay nisianà filohan'ny biraom-pifidianana nandà mafy tsy hanao sonia ny fitarainan'ny olona sy niteny hoe: “Tsy hanao sonia izay mpanohitra tolon'omby mihitsy aho.”
Raha kely indrindra dia indroa ireo mpanao gazety no voaroaka nivoaka ny biraom-pifidianana [es] satria tsy te-ho azo sary ireo filohanà biraom-pifidianana, na dia nanazàva aza ireo mpaka sary fa haka sary fotsiny an'ireo mpikambana ao amin'ny kaongresy tonga hifidy no hataon'izy ireo.
Tato anatin'ny herinandro vitsy dia tsy tambo nisaina ireo tetikady fanoherana fampielezan-kevitra, toy ny antson'ny vondrona hacker mafàna fo Anonymous nampiasa ny tenifototra #Op20N mba “hijirihana ny fifidianana” hitenenana ny olona hifidy manohitra ny “bipartisme” an'ny PP sy ny PSOE [es] (Popular Party sy Entoko Sosilaistan'ny Mpiara Espaniola) na hanao vato fotsy. Nisy koa ny Doriyakitu [es], fanentanana iray nandrisika ny mpifidy hametraka fitarainana manohitra ny rafitra mifototra amin'ny And. 19 ao amin'ny Lalàm-pifidianana, milaza tsy fankatoavana ny fisian'antoko politika maro, na ny tsy fitongilanan'ny lalàm-pifidianana (D'hont Method ), ankoatry ny olana hafa.
Azonao atao ny mizaha ny vokatry ny fifidianana parlemantera 2011 ao amin'ny vohikala ofisialy [es]